फेरि विद्यालय बन्द गर्ने तयारी ? - Rising Dainik
फेरि विद्यालय बन्द गर्ने तयारी ?
April 8, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on फेरि विद्यालय बन्द गर्ने तयारी ?
काठमाडौं- पछिल्लो पटक ३ सय भन्दा बढी जनामा कोरोनाभाइरसको सं’क्रमण बढेपछि नेपालमा ख’तरा बढेको सं’केत देखिएको’ छ । सं’क्रमणबाट विद्यालय प्रभावित हुनसक्ने भन्दै सरकारले चि’न्ता बढेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यालय जाने उमेर समूहमा कोरोना भाइरसको सं’क्रमण बढ्न थालेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो । बुधबार मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौं, पोखरालगायतका ठूला शहरहरुमा विद्यालय जाने उमेर समूहमा पनि सं’क्रमण बढ्दो रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो ।
पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणबाट विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामा सं’क्रमण बढेको तथ्यांक उल्लेख छ । लामो समयपछि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएका विद्यालय फेरि ब’न्द हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा कोरोना सं’क्रमणको असर उच्च देखिने भएकाले पनि विद्यालय बन्द हुन सक्ने कतिपयको आँकलन छ । मन्त्रालयले बढी भीडभाड हुने स्थानहरुमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड क’डाइका साथ पालना गरेर मात्र विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसले सरकार ढाल्ने निर्णय गरेलगत्तै एकताका मूख्य सूत्रधार मानिएका एमाले र माओवादीका यी दुई शक्तिशाली नेताबीच गोप्य भेट भएको खुलासा, के भयो कुराकानी ?
April 4, 2021 Ramash Kunwar
नेकपामा आफन्त बनाउ अभियान: सुर्य थापाका भाईलाई पनि सुटुक्क नियुक्ति
पार्किङ वि’वादमा आफ्नै छोराले लिए बुढी आमाको ‘ज्या’न’ (भिडियोसहित)